लोकसेवाले सार्वजनिक गर्‍यो पदपूर्ति तालिका :- कुन सेवाको परीक्षा कहिले ? - Ekarmachari /* google adsense */
१ श्रावण २०७८, शुक्रबार १४:३३
लोकसेवाले सार्वजनिक गर्‍यो पदपूर्ति तालिका :- कुन सेवाको परीक्षा कहिले ?
१ श्रावण २०७८, शुक्रबार १४:३३ July 16, 2021
लोकसेवा आयोगले २०७८/७९ को पदपूर्ति सम्वन्धी बार्षिक कार्य तालिका सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले चौथो तह देखि एघारौँ तहसम्मको खुल्ला तथा बढुवा सम्बन्धी परीक्षा कहिले कहिले हुँदैछ भनेर तालिका सार्वजनिक गरेको हो ।
आयोगले स्वास्थ्य सेवा, एघारौँ र नवौं तहका लागि असोज अन्तिम बुधबार विज्ञापन प्रकाशन गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा, आठौं तह र स्वास्थ्य सेवा, सातौँ तहका लागि कात्तिकको अन्तिम बुधबार विज्ञापन प्रकाशन गर्ने आयोगले जनाएको छ।
आयोगले सुरक्षा निकाय,संगठीत संस्था,प्रशासन सेवा र स्वास्थ्य सेवाको पदपूर्तिका लागि लिइने परीक्षाको विज्ञापन प्रकाशन हुने मिति,परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र अन्तरवार्ता र सिफारिसको मिति सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रकाशित मिति : १ श्रावण २०७८, शुक्रबार १४:३३ July 16, 2021 १ श्रावण २०७८, शुक्रबार १४:३३